जनजातिका मौलिक हस्तकला निकासी गर्ने प्रमुख उद्देश्य हो
हस्तकला महासंघको २०२९ सालमा स्थापना भयो । यसले खास के के काम गर्छ ?
गतिविधि त थुप्रै किसिमका हुन्छन् । हस्तकलाका सामग्रीको स्वदेश, विदेशमा व्यापार मेला, हस्तकलाका हरेक विधामा प्रशिक्षण दिन्छौँ । उद्यमीहरुलाई चाहिने महत्वपूर्ण सेमिनार र गोष्ठीको पनि आयोजना गर्छौँ ।
नेपालका विभिन्न किसिमका जातजातिहरुका आआफ्नै मौलिक हस्तकला छन् । त्यसको व्यापारीकरणको लागि कुनै ठोस कदम चाल्नु भएको छ ?
हाम्रो मुख्य काम नै व्यापारलाई सघाउनु हो । जसमा आन्तरिक र बाह्य व्यापार पनि पर्दछ । आन्तरिक बजारको पनि आफनै महत्व हुन्छ, खपत पनि आन्तरिक बजारमा नै भइरहेको छ । यहाँका जातजातिहरुका मौलिक हस्तकला विदेशमा निकासी गर्ने पनि हाम्रो एउटा प्रमुख उद्देश्य हो, जसमा लागिरहेका छौं । राडी पाखीको कुरा गर्दा हामीले धेरै वर्ष अगाडि गरेका थियौँ । तर विदेशीको लागि त्यति गुणस्तर भएन । किनभने त्यसमा चाहीँ रंगहरु टाँसिने भएकाले चित्तबुझदो भएन । तर राडीको विकल्पको लागि अन्तराष्ट्रिय बजारमा ऊनको सामानहरुको माग छ । फेल्ट चाहिँ ऊन बाट बन्ने नयाँ किसिमको राडी पाखी भन्दा राम्रो हो । फेल्टबाहेक ऊनबाट बन्ने अन्य सामानको माग धेरै छ ।
हाम्रो मुख्य काम नै व्यापारलाई सघाउनु हो । जसमा आन्तरिक र बाह्य व्यापार पनि पर्दछ । आन्तरिक बजारको पनि आफनै महत्व हुन्छ, खपत पनि आन्तरिक बजारमा नै भइरहेको छ । यहाँका जातजातिहरुका मौलिक हस्तकला विदेशमा निकासी गर्ने पनि हाम्रो एउटा प्रमुख उद्देश्य हो
कुन कुन चिज अहिले निकासी भइरहेको छ ?
हस्तकलासम्बन्धी थुप्रै किसिमका सामानहरु छन् । हामीले ४२ किसिमका सामानहरु वर्गिकरण गरेका छौँ । निर्यातको लागि नै हामी प्रयासरत छौँ । वास्तवमा कुनै सामान बिकाउनका लागि नयाँ डिजाइन र फिनिसिङ हुन जरुरी छ । क्वालिटी पनि छिटो बिग्रिने किसिमको हुनु भएन । महँगै सामान भएता पनि गुणस्तरीय सामान बिक्री हुन्छ ।
सर्वसाधारणले हस्तकला महासंघबाट के कस्तो लाभ लिन सक्छन् ?
सर्वसाधारणले फाइदा उठाउन सक्ने भनेको सानो हिसाबले उद्यम गर्नको लागि टे«निङ नै हो । उद्यमीहरुले सिक्ने भनेको चाहीँ नेपाल सरकारका नीति नियमहरुको के व्यवस्था छ भनेर बुझ्न सक्छन् । निर्यातसम्बन्धी समस्याहरु र निर्यात गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हामी नेपाल सरकारसँग लबी गरेर नीतिमा पार्ने हामी कोसिस गर्छौँ । हस्तकला महासंघमा जो कोही स्वतन्त्रपूर्वक आउन सक्नुहुन्छ । एउटा अर्को शाखाको रुपमा हस्तकला डिजाइन तथा विकास केन्द्र पनि खोलेका छाँै । यसमार्फत् पनि विभिन्न टे«निङहरु दिइरहेका छाँै ।
हस्तकला महासंघको शाखा कति जिल्लामा विस्तार भएको छ ? शाखाहरुले के कस्ता गतिविधिहरु गरिरहेका छन् ?
प्रतिलिपि अधिकारको सन्दर्भमा हामी बारम्बार अन्र्तक्रिया कार्यक्रमहरु गरिराखेका छौँ । हस्तकला एउटा यस्तो विषय हो, जुन प्रतिलिपि अधिकारबाट अलिकति पछाडि परेको जस्तो मलाई पनि लाग्छ । किनभने धेरै जसो सामानहरु एउटै कम्पनीले बनाउँदैन । हरेक कलाकारले एउटै किसिमका सामानहरु पनि बनाउन सक्छन् ।
अहिले हामी १५ जिल्लामा पुगेका छाँै । क्षेत्रगत हिसाबले अहिले ४ विकास क्षेत्र पुगिसकेका छाँै । सुदुरपश्चिममा पनि पुग्ने लक्ष्य छ, सायद यो महिनाभित्र पुग्छाँै होला । नयाँ हिसाबले जति प्रदेश बन्ला, त्यो हिसाबले पनि सोच्दै जानेछाँै । शाखाहरुलाई हामी केही आर्थिक सहयोग पनि गर्छौँ र विभिन्न किसिमका टे«निङहरु पनि दिन्छौँ । परामर्शदाता प्रशिक्षकहरु उपलब्ध गराइदिन्छाँै । जस्तो कि दाङमा शाखा साथीहरुले विभिन्न प्रकारका ४÷५ वटा ट्रेनिङहरु दिइसकेका छन् जस्तो लाग्छ । त्यसमा हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ । स्थानीय कच्चा पदार्थको उत्पादनबाट पनि केही गर्न सक्छौँ भनेर प्रबद्र्धनमा लागि परेका छौँ ।
हस्तकलाका विभिन्न थरीका सामानहरु उत्पादन हुँदा प्रतिलिपि अधिकारको सन्दर्भमा हस्तकला महासंघ कत्तिको सजग छ ?
प्रतिलिपि अधिकारको सन्दर्भमा हामी बारम्बार अन्र्तक्रिया कार्यक्रमहरु गरिराखेका छौँ । हस्तकला एउटा यस्तो विषय हो, जुन प्रतिलिपि अधिकारबाट अलिकति पछाडि परेको जस्तो मलाई पनि लाग्छ । किनभने धेरै जसो सामानहरु एउटै कम्पनीले बनाउँदैन । हरेक कलाकारले एउटै किसिमका सामानहरु पनि बनाउन सक्छन् । आफनो डिजाइनको चाहिँ रजिस्ट्रशेन दर्ता गरेर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । प्रतिलिपिको हकमा ह्यान्डीक्राफटमा मैले सुनेअनुसार डाइरेक्ट प्रतिलिपि अधिकार पाउने सम्भावना कम छ । तर आफ्नो डिजाइनको उद्योग विभागमा दर्ता गरेर फाइदा लिन सक्छाँै ।